သမ္မာတရား၏နှစ်ကာလ Christian Online Magazine MYATMINGALAR
လူများ၏အတွေးအခေါ်ပညာရပ်တွေကို လေ့လာကြည့်ရင် တစ်ခေတ်နဲ့တစ်ခေတ် ပိုမိုဆန်းသစ် လာပြီး ပြောင်းလဲမှု့တွေရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှု့၊ အသိပညာကွယ်ဝမှု့တွေထဲမှာလည်း တစ်သတ်မှတ်တည်းမဟုတ်၊ ပြောင်းလဲမှု့တွေရှိနေပါတယ်။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကကော ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှု့တွေရှိနေပြီလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်၊ သုံးသပ်ကြည့်ဖို့ လိုနေ ပါပြီ။
တချို့ဆိုရင် ဘုရားသခင်မရှိဘူးလို့ ဆိုကြတယ်။ တချို့ကရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှိနေတာပဲရှိတယ်။ လူကသာပဓါနဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်၊ ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေရှိနေခြင်းက လူတွေရဲ့တိုးတက်လာမှု့လား ! ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှု့ရဲ့ပြယုဂ်လား!
မိမိတွေးတဲ့အတိုင်း မိမိဘဝကိုပုံဖေါ်ကြတဲ့အခါ ယခုလက်ရှိတွေ့မြင်နေရတဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ သင်တွေးတောမှု့ရဲ့ အဆင်းသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ်၊ အခြားသူတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရာရာအားလုံး ဘယ်သို့ဦးတည်သွားနေပါသလဲဆိုတာ တွေးကြည့်ပါအုံး။
လူတိုင်းက ရှေးဦးစွာအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဖြစ်မလာပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အတွေးအခေါ်နောက်လိုက် များတော့ဖြစ်နိုင်ကြပါတယ်။ မိမိသဘောကျ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အယူူအဆအတွေးအခေါ်ကို ခံယူကြရင်း ယနေ့ကမ္ဘာမှာ ဝါဒကွဲပြားမှု့၊ လူမှု့အသိုက်အဝန်းမတူညီမှု့၊ ဓလေ့စရိုက်စသဖြင့် အမျိုးမျိုးအထွေထွေ ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှ အမှန်ဆုံးအယူဝါဒ၊ လူမှု့အသိုက်အဝန်းဓလေ့စရိုက်ကို ရှာဖွေမယ်ဆိုရင် သမ္မာတရားနဲ့ ညီမှသာ ဖြစ်နိုင်ပါမယ်။ သမ္မာတရားနဲ့သွေဖီသော အမှုအရာတိုင်းရဲ့အဆုံးမှာ ပျက်စီးခြင်းရှိနေမှာဖြစ်လို့ အမှန်ဆုံးလို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ဒီလိုဆိုရင် သမ္မာတရားကိုသိကျမ်းခြင်းက အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ “သမ္မာတရားကိုလည်းသိကြသဖြင့် ထိုတရားသည် သင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်” (ယော ၈း၃၂ ) ဟု ဆိုထားသဖြင့် လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အစက သမ္မာတရားကိုသိခြင်းပါပဲ။ ” မရှိတာထက် မသိတာခက် ” ပေသပေါ့။
အပြစ်ငရဲမှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ ညှင်းဆဲခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု့မှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ စာတန်ချည်နှောင်မှု့မှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ ပူဆွေးသောကများမှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ အကွေးတင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်း။ ကြောက်ရွံ့မှု့မှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ အနာရောဂါမှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ လောဘကြီးခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ အမျက်ဒေါသကြီးခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ ကိလေသာပူပန်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ စတဲ့ခပ်သိမ်းသောအမှု့အရာထဲမှ လွတ်မြောက်ခြင်းကို သမ္မာတရားကပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
သမ္မာတရားကိုသိရှိလာသောအခါ သင်ငရဲမှလွတ်မြောက်၍ ကောင်းကင်နေရာရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ ထိုထက်ပိုမိုသိရှိလာမှု့အပေါ်သင်၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ သက်သာရာရခြင်း၊ ကွယ်ဝခြင်း၊ ချမ်းသာရခြင်း၊ ဘုရားသခင်အစေခံလာနိုင်ခြင်း၊ မျော်လင့်ချက်ရှိလာခြင်း၊ သူတပါးအားပေးကမ်းလာနိုင်ခြင်း၊ ရဲရင့်ခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်း၊ ရောင့်ရဲခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းနိုင်ခြင်း စတဲ့အကျိုးများ ခံစားရရှိလာမှာ ဖြစ်တယ်။
သမ္မာတရားကိုသိဖို့ ကြိုးစားသင်ယူဖို့လိုပါတယ်။ ကြားနာရုံနဲ့မလုံလောက်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှု့ရ ပါမယ်။ ဒါနဲ့လည်းမလုံလောက်ပါ။ လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ အလွတ်ကျက်မှတ်ဖို့လဲလိုပါသေးတယ်။ ဆင်ခြင်အောက်မေ့ပါအုံး။
သင်ကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ လောကီပူပန်မှု့မှလွတ်ငြိမ်းရာ သုခချမ်းသာ လို့တင်စားပြောဆိုနေတဲ့ ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကို ရောက်ချင်လှပြီလို့ ငြီးတွားပြောဆိုနေမဲ့အစား သမ္မာတရားကို သိအောင်ကြိုးစားပါ။ လောကမှာနေစဉ်ပင် လောကပူလောင်မှု့မှ လွတ်မြောက်ခြင်း၏ ကောင်းကင်အရသာကို ခံစားရပါမယ်။
ယုံကြည်သူတိုင်း လွတ်မြောက်ခြင်းအရသာကိုခံစားသိရှိဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ ဂုဏ်ပကာသနနဲ့ ဇာတိလှမ်းမိုးသောလောကကြီးထဲမှာ သမ္မာတရားကိုသိသော ယုံကြည်သူများအားဖြင့် ဘုရားဘုန်းထင်ရှားသောနိုင်ငံတော်ကို ဤမြေပေါ်၌တည်ထောင်ကြဖို့ လိုနေပါပြီ။ ယခုနှစ်ဟာ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တည်ထောင်သောနှစ်ဖြစ်စေဖို့ သမ္မာတရားကိုအားပြုကြပါစို့။
တစ်နေ့ ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားစဉ် ဆောက်လုပ်ဆဲတိုက် တစ်လုံးကို သတိပြုမိပါတယ်။ အဲဒီနေရာရှေ့ မှ ဖြတ်နေကြမို့ သတိထားမိတဲ့သဘောပါ။ ပထမ တော့ မြေကွက်လပ်သာဖြစ်နေပြီး တော်တော်ကြာမှ အုတ်မြစ်ချကာ အဆောက်အဦး